Ireo zavamaniry mahery vaika mahery vaika eto an-tany | Fanavaozana maintso
Ny angovo herinaratra avy amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra dia ny loharano azo havaozina voalohany eto amin'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao ny ny herinaratra napetraka dia mihoatra ny 1.000 GW ary ny famokarana tamin'ny 2014 dia nahatratra 1.437 TWh, izay nahatratra 14% ny famokarana herinaratra manerantany araka ny angon-drakitra avy amin'ny International Energy Agency (IEA).
Ankoatr'izay, araka ny vinavinan'io masoivoho io ihany, hitombo hatrany ny tahan'ny herinaratra mandeha amin'ny alàlan'ny tombatombana mandra-pandoby ny heriny ankehitriny mihoatra ny 2.000 GW ny herinaratra napetraka amin'ny 2050.
2 Toeram-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra ao amin'ny Three Gorges
3 Zavamaniry herinaratra Itaipu
4 Toeram-pamokarana herinaratra elektrika Xiluodu
5 Toeram-pamokarana herinaratra elektrika ao Guri.
6 Zavamaniry herinaratra Tucuruí
Ny hydropower dia manana tombony betsaka noho ny ankamaroan'ny loharanon-kery elektrika hafa, ao anatin'izany ny fahamendrehana avo lenta, teknolojia voaporofo ary fahombiazana avo, fandaniana farany ambany sy fikojakojana.
Ny hydropower no loharano lehibe azo havaozina, satria telo heny ny rivotra, izay misy 350 GW no loharano faharoa. Ny fandraisan'anjaran'ity teknolojia ity tato anatin'ny taona vitsivitsy dia niteraka herinaratra betsaka kokoa noho ny sisa amin'ny miaraka amin'ny angovo azo havaozina. Ary goavana ny fivoaran'ny teknolojia an'ity teknolojia ity, indrindra any Afrika, Azia ary Amerika Latina. Ny tondrozotra IEA dia naminavina fa ny fahaiza-manao napetraka manerantany dia hitombo avo roa heny amin'ny 2.000 GW amin'ny 2050, miaraka amin'ny famokarana herinaratra manerantany mihoatra ny 7.000 TWh.
Ny fitomboan'ny taranaka mpamokatra herinaratra dia avy amin'ny ankapobeny tetikasa lehibe amin'ny toekarena mivoatra sy mandroso. Any amin'ireny firenena ireny, ny tetikasa famokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra lehibe sy kely dia afaka manatsara ny fidirana amin'ny serivisy angovo herinaratra ary mampihena ny fahantrana amin'ny faritra maro eto an-tany, izay tsy nahatratra herinaratra sy rano fisotro.
Ny angovo Hydroelectric, azo tamin'ny alàlan'ny fampiasana angovo kinetika sy ny mety hisian'ny onjan-drano sy riandrano, dia iray amin'ireo loharano azo havaozina taloha ary ampiasain'ny planeta hahazoana angovo. Sina no mpamokatra angovo mpamokatra herinaratra lehibe indrindra eran-tany, arahin'i Brezila, Kanada, Etazonia ary Russia, firenena manana zavamaniry lehibe indrindra eran-tany.
Manaraka izany dia ho hitantsika ireo top 5 amin'ireo zavamaniry hydroelectric
Toeram-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra ao amin'ny Three Gorges
Ireto zavamaniry mpamokatra herinaratra ireto dia manana tanjaka 22.500 MW. Any Yichang, faritanin'i Hubei no misy azy, ary izy no lehibe indrindra manerantany. Izy io dia toeram-pitrandrahana rano mandeha amin'ny rano mahazatra izay mampiasa rano avy amin'ny renirano Yangtze.
Ny fananganana ny tetikasa dia nitaky fampiasam-bola 18.000 tapitrisa euro. Nanomboka tamin'ny 1993 ity fanamboarana mega ity ary vita tamin'ny 2012. Nanomboka ny tohodrano 181 metatra ny haavony ary 2.335 32 metatra ny halavany, notontosaina izy io ho ampahany amin'ny tetik'asa Three Gorges, mifandray amin'ny toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra izay misy turbin 700 miisa 50 MW tsirairay avy, ary singa 2014 miteraka 98,8 MW. Amin'izao fotoana izao, ny famokarana angovo isan-taona an'ny zavamaniry dia nametraka ny firaketana an'izao tontolo izao tamin'ny XNUMX miaraka amin'ny XNUMX TWh, ahafahan'ny herinaratra omena amin'ny faritany sivy sy tanàna roa, anisan'izany i Shanghai.
Zavamaniry herinaratra Itaipu
Ny toby famokarana herinaratra avy amin'ny herinaratra ao Itaipu, miaraka amina kapila 14.000 MW, no lehibe indrindra manerantany. Any amin'ny Ony Paraná no misy ny fotodrafitrasa, eo amin'ny sisin-tany manelanelana an'i Brezila sy Paraguay. Ny famatsiam-bola natao tamin'ny fananganana ilay orinasa dia 15.000 tapitrisa euro. Ny asa dia natomboka tamin'ny taona 1975 ary vita tamin'ny 1982. Ireo injeniera ao amin'ny consortium an'ny IECO miorina any Etazonia ary Elektronika ELC monina any Italia, nanatanteraka ny fanamboarana, nanomboka ny famokarana herinaratra avy amin'ny orinasa tamin'ny Mey 1984.
Ny tobim-pamokarana herinaratra Itaipu dia mamatsy manodidina ny 17,3% amin'ny fanjifana angovo any Brezila sy ny 72,5% -n'ny angovo lany ao Paraguay. Manokana, izy io dia misy singa miteraka 20 manana tanjaka 700 MW tsirairay.
Toeram-pamokarana herinaratra elektrika Xiluodu
Ity toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra ity dia miorina eo amin'ny lalan'ny reniranon'i Jinsha, reniranon'ny reniranon'i Yangtze amin'ny làlamben'i ambony, eo afovoan'ny faritanin'i Sichuan izy, ity no toby famokarana herinaratra faharoa lehibe indrindra ao Shina ary fahatelo lehibe indrindra manerantany . Ny fahaizan'ny zavamaniry napetraka dia nahatratra 13.860 MW tamin'ny faran'ny 2014 rehefa napetraka ny turbine roa farany. Ny tetik'asa dia novolavolain'ny Orinasa telo Gorges Project Corporation ary antenaina hiteraka herinaratra 64 TWh isan-taona rehefa miasa tanteraka.
Ny tetikasa dia nila fampiasam-bola 5.500 tapitrisa euros ary ny fananganana dia nanomboka tamin'ny 2005, nanomboka ny turbine voalohany tamin'ny volana jolay 2013. Ilay tohodrano dia misy tohandrano miolaka avo roa heny 285,5 metatra ny sakany ary 700 metatra ny sakany, mamorona fitahirizan-drano misy fitehirizana 12.670 tapitrisa metatra toratelo. Ireo fitaovan'ny fotodrafitrasa, natolotry ny injeniera Voith, dia misy mpamorona turbine 18 Francis izay mahazaka 770 MW tsirairay avy ary generator misy rivotra miaraka amin'ny vokatra 855,6 MVA.
Toeram-pamokarana herinaratra elektrika ao Guri.
Ny zavamaniry Guri, fantatra ihany koa amin'ny anarana famokarana herinaratra Simón Bolívar, dia napetraka ho iray amin'ireo lehibe indrindra eto an-tany, miaraka amin'ny fahaizana napetraka 10.235 MW. Any amin'ny Reniranon'i Caroní, any atsimo atsinanan'i Venezoela, no misy ny fampitaovana.
Ny fananganana ny tetikasa dia natomboka tamin'ny taona 1963 ary natao tamin'ny dingana roa, ny voalohany dia vita tamin'ny 1978 ary ny faharoa tamin'ny 1986. Ny zavamaniry dia manana zana-taranaka 20 manana fahaiza-manao isan-karazany eo anelanelan'ny 130 MW sy 770 MW. Ny orinasa Alstom dia voafidy tamin'ny alàlan'ny fifanarahana roa tamin'ny 2007 sy 2009 ho an'ny fanavaozana ireo singa efatra 400 MW sy dimy 630 MW, ary i Andritz koa dia nahazo fifanarahana hanomezana turbine Francis 770MW dimy tamin'ny taona 2007. Taorian'ny fanavaozana ireo fitaovan'ny taranaka dia nahavita herinaratra ilay zavamaniry famatsiana mihoatra ny 12.900 XNUMX GW / h.
Zavamaniry herinaratra Tucuruí
Ity tohodrano ity dia miorina amin'ny tapany ambany amin'ny reniranon'i Tocantins, any Tucuruí, an'ny an'ny Fanjakan'i Pará any Brezila, izy io dia toerana ivozampitrandrahana herinaratra elektrika lehibe indrindra eran-tany miaraka amin'ny 8.370 XNUMX MW. ny fananganana tetikasa, izay nitaky fampiasam-bola 4.000 tapitrisa euro, dia natomboka tamin'ny taona 1975 ary ny dingana voalohany dia vita tamin'ny taona 1984, izay misy tohodrano simenitra mirefy 78 metatra ny halavany ary 12.500 metatra ny halavany, singa miteraka 12 manana tanjaka 330MW tsirairay. vondrona mpanampy 25 MW.
Ny dingana faharoa dia nanampy toby famokarana herinaratra vaovao izay natomboka tamin'ny taona 1998 ary vita tamin'ny faran'ny taona 2010, izay nametrahana ireo singa 11 manana zana 370 MW tsirairay avy. Ireo injenieran'ny consortium noforonin'i Alstom, GE Hydro, Inepar-Fem ary Odebrecht namatsy ny
fitaovana ho an'ity dingana ity. Amin'izao fotoana izao dia mamatsy herinaratra ny tanànan'ny Belém sy ny manodidina azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » angovo hydraulic » Ireo zavamaniry mahery vaika eto an-tany